Semalt Expert: Ahoana ny fanesorana ny tsetsatsetsa amin'ny WordPress?
Ny fanehoan-kevitry ny spam dia olana lehibe ho an'ny webmasters sy bilaogera. Raha namorona bilaogy iray na tranokala WordPress ianao, mety ho fantatrao io loza io ary mety te hamafa sy hanakana ny fanehoan-kevitra amin'ny spam. Misy karazana fiarovana sy fanamarihana spam marobe ary plugins online. Ny olona sasany dia manafoana ireo fanehoan-kevitra ireo, raha ny hafa kosa mametraka plugins na programa manan-danja.
Jack Miller, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia mamelabelatra momba ireo torohevitra mahasoa ao amin'io lafiny io.
Hatramin'izao, Akismet no mpamaly tsara indrindra momba ny spam ao anaty aterineto. Ireo tranonkala sy bilaogy Wordpress dia nametraka azy tamin'ny alalana, ary mampiasa algorithms isan-karazany i Akismet miaraka amin'ny vohikalam-piarahamonina noforonina mba hahafantarana hoe inona ny fanamarihana dia sandoka sy spam ary iza no ara-dalàna. Mba hizarana ny Akismet amin'ny tranokalan'ny WordPress, tokony handeha any amin'ny faritra Plugins ianao ary tsindrio ny bokotra Activate. Rehefa tafiditra indray i Akismet, dia ho hitanao fa ny laharam-pahamehan'ny spam dia mifantoka amin'ny faritra misy ny "Comments Panel", izay midika fa tsy hiseho ao amin'ny blôginao na tranonkala izy ireo. Ny fanehoan-kevitra rehetra dia tsy maintsy mamakivaky ny tambajotra Akismet, ary ny fampahalalana tsy misy ilàna azy dia ampidirina ao amin'ny tahiry voarindra ao amin'ny vondrona.
Raha tsy te hampiasa ity WordPress plugin ity ianao, dia misy dingana vitsivitsy izay mampanantena ny hisoroka ny sombin-tsakafo lehibe tsy hampahatezitra anao ary hiditra ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra mihoa-pampana..
1. Mora manaisotra ny spam Comments:
Raha naharay fanehoan-kevitra momba ny spam ianao, fotoana izao hamafana azy rehetra ary hisoroka ny fahatongavany amin'ny ho avy. Noho izany dia tokony hanaraka ireto dingana tsotra ireto ianao:
Mametraka ny Plugin Comment Valifaty ho valin-kafatra ao amin'ny tranokala WordPress
Mankanesa any amin'ny fanehoan-kevitra -> Hamafa ny toerana misy ny valin-kisoratra ary tsindrio eo amin'ny bokotra Remote Pending Comments
Ity plugin ity dia hamafa ireo fanehoan-kevitra tsy misy dikany sy tsy misy ilana azy ao anatin'ny iray
2. Ampio ny lisitry ny fanamarihana Blacklist tenifototra:
Fotoana izao hisorohana ny fanehoan-kevitra momba ny spam any amin'ny tranokalanao ary mampahatezitra anao:
Sokafy ny WordPress Comment Blacklist Fichier fichier on your dashboard WordPress
Alefaso ny lisitr'ireo teny manan-danja tsy fantatra sy tsy fantatra
Mandehana ao amin'ny dashboard ao amin'ny WordPress anao, mandehana any amin'ny faritra Fifanakalozan-kevitra -> Fifanakalozan-kevitra ary ampidiro ireo teny fanalahidy ao amin'ny faritra Blacklist Comment
Vonjeo ny fanovana alohan'ny hanakatonana ny varavarankelinao
3. Tweak ny safidin'ny WordPress:
Ny sehatra fifanakalozan-kevitra ao amin'ny WordPress blog dia azo henoina araka ny fangatahanao. Azonao atao koa ny manafoana ny faritra misy ny fampandrenesana ary manaisotra ny fanehoan-kevitra amin'ny spam avy hatrany.
4. Ampiasao ireo Plugins Anti-Spam an'i Akismet:
Tahaka an'i Akismet, WordPress dia manana plugins anti-spam ampolony mba hahazoana tombontsoa. Ny ankabeazan'ireo plugins ireo dia maimaimpoana ary afaka manampy anao hanaisotra ireo fanehoan-kevitra tsy misy ilàna azy ao anatin'ny fotoana fohy. Ataovy azo antoka fa nanavao ny plugin ianao ary nosoloinao tamin'ny dikan-teny vaovao satria ny mpitsikilo sy ny hackers dia mikaroka hatrany ireo teknika vaovao sy fomba hitadiavana vohikala maro. API plugin dia miasa tsara tahaka an'i Akismet ary azo alaina ao amin'ny faritra Plugin Directory
Famaranana - Vita ianao:
Ny fametrahana plugin dia tsy henjana, ary maro ny olona tia ny fomba i Akismet momba ny fanamarihana spam. Plus, ity plugin ity dia maivana, manolotra karazan-javatra maro, ary afaka ampiasaina Source .